အားဖြည့်အချိုရည်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် လေဖြတ်နိုင်ချေ ၅ ဆ အထိ တိုးလာနိုင် - Real Gaming Myanmar
အားဖြည့်အချိုရည်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် လေဖြတ်နိုင်ချေ ၅ ဆ အထိ တိုးလာနိုင်
၂၀၁၇ နှစ်အတွင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေ သောက်သုံးခဲ့တဲ့ အားဖြည့်အချိုရည်စုစုပေါင်း ၆၇၉ မီလျံ လီတာရှိပါတယ်။ အားဖြည့်အချိုတွေ ပုံမှန်သောက်သုံးတဲ့သူတွေဟာ သာမန်လူတွေထက် လေဖြတ်နိုင်ချေ ၅ ဆတိုးလာနိုင်ကြောင်းသုတေသီတွေက သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ ။ အားဖြည့်အချိုရည်တွေဟာ Arrhythmia လို့ခေါ်တဲ့ နှလုံးခုန်မူမမှန်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် လေဖြတ်နိုင်ချေတိုးလာရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ….. ။
“အားဖြည့်အချိုရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကဖင်းဓါတ်တွေဟာ နှလုံးခုန်ခြင်းကိုမူမမှန်ဖြစ်စေပါတယ်။တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ ခြောက်ခွက် ခုနှစ်ခွက်သောက်မယ်ဆိုရင်လည်း နှလုံးခုန်မူမှန်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အားဖြည့်အချိုရည်တွေရဲ့ သက်ရောက်မှုက ကော်ဖီထက်ကို အများကြီးပိုပြင်းထန်ပါတယ်” လို့ The Arrhythmia Allicance ရဲ့တည်ထောင်သူ CEO Trudie Lobban က ပြောထားပါတယ် ….. ။
ဆောက်လုပ်ရေးမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ် Mark Horsman ဟာဆိုရင် တစ်နေ့ကို ကော်ဖီ ၈ ခွက်နဲ့ Red Bull ၃ ဘူးသောက်သုံးခဲ့တာကြောင့် နှလုံးဖောက်ပြန်တဲ့ဝေဒနာခံစားခဲ့ရပြီး သေလုနီးပါးဖြစ်သွားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အားဖြည့်အချိုရည် ၂၅၀ မီလီလီတာတိုင်းမှာ ကဖင်းဓါတ် ၂၀ မီလီဂရမ်ပါဝင်နေလေ့ရှိတဲ့အတွက် သာမန်ကိုလာဘူးတွေမှာပါဝင်တဲ့ ကဖင်းဓါတ်ထက် ၂ ဆပိုများနေပြီး Espresso ၆၀ မီလီမီတာမှာပါရှိတဲ့ ကဖင်းဓါတ်နဲ့တူညီတဲ့ပမာဏဖြစ်နေပါတယ် …. ။
British Hearth Foundation မှ စီနီယာနှလုံးအထူးကု နာ့စ်မတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Julie Ward ကတော့ သင့်တင့်မျှတတဲ့ပမာဏတစ်ခုအတိုင်းသောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါပေမယ့် တကယ်လို့ ကော်ဖီ သို့မဟုတ် အားဖြည့်အချိုရည် သောက်ပြီးနောက် နှလုံးခုန်မမူမှန်တာမျိုးခံစားရရင်တော့ ဒါတွေကိုလုံးဝဆက်မသောက်သင့်ပါဘူး လို့ သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ် …… ။
၂၀၁၇ နှဈအတှငျး ဗွိတိနျနိုငျငံသားတှေ သောကျသုံးခဲ့တဲ့ အားဖွညျ့အခြိုရညျစုစုပေါငျး ၆၇၉ မီလြံ လီတာရှိပါတယျ။ အားဖွညျ့အခြိုတှေ ပုံမှနျသောကျသုံးတဲ့သူတှဟော သာမနျလူတှထေကျ လဖွေတျနိုငျခြေ ၅ ဆတိုးလာနိုငျကွောငျးသုတသေီတှကေ သတိပေးခကျြထုတျပွနျလိုကျပါပွီ ။ အားဖွညျ့အခြိုရညျတှဟော Arrhythmia လို့ချေါတဲ့ နှလုံးခုနျမူမမှနျခွငျးကို ဖွဈစနေိုငျတဲ့အတှကျ လဖွေတျနိုငျခတြေိုးလာရတာပဲဖွဈပါတယျ ….. ။
“အားဖွညျ့အခြိုရညျမှာ ပါဝငျတဲ့ ကဖငျးဓါတျတှဟော နှလုံးခုနျခွငျးကိုမူမမှနျဖွဈစပေါတယျ။တဈနကေို့ ကျောဖီ ခွောကျခှကျ ခုနှဈခှကျသောကျမယျဆိုရငျလညျး နှလုံးခုနျမူမှနျဖွဈစနေိုငျတယျဆိုပမေယျ့ အားဖွညျ့အခြိုရညျတှရေဲ့ သကျရောကျမှုက ကျောဖီထကျကို အမြားကွီးပိုပွငျးထနျပါတယျ” လို့ The Arrhythmia Allicance ရဲ့တညျထောငျသူ CEO Trudie Lobban က ပွောထားပါတယျ ….. ။
ဆောကျလုပျရေးမနျနဂြောတဈယောကျဖွဈတဲ့အသကျ ၅၂ နှဈအရှယျ Mark Horsman ဟာဆိုရငျ တဈနကေို့ ကျောဖီ ၈ ခှကျနဲ့ Red Bull ၃ ဘူးသောကျသုံးခဲ့တာကွောငျ့ နှလုံးဖောကျပွနျတဲ့ဝဒေနာခံစားခဲ့ရပွီး သလေုနီးပါးဖွဈသှားခဲ့ရဖူးပါတယျ။ အားဖွညျ့အခြိုရညျ ၂၅၀ မီလီလီတာတိုငျးမှာ ကဖငျးဓါတျ ၂၀ မီလီဂရမျပါဝငျနလေရှေိ့တဲ့အတှကျ သာမနျကိုလာဘူးတှမှောပါဝငျတဲ့ ကဖငျးဓါတျထကျ ၂ ဆပိုမြားနပွေီး Espresso ၆၀ မီလီမီတာမှာပါရှိတဲ့ ကဖငျးဓါတျနဲ့တူညီတဲ့ပမာဏဖွဈနပေါတယျ …. ။
British Hearth Foundation မှ စီနီယာနှလုံးအထူးကု နာ့ဈမတဈယောကျဖွဈတဲ့ Julie Ward ကတော့ သငျ့တငျ့မြှတတဲ့ပမာဏတဈခုအတိုငျးသောကျသုံးမယျဆိုရငျတော့ခန်ဓာကိုယျကို ထိခိုကျနိုငျမှာမဟုတျကွောငျး ရှငျးပွထားပါတယျ။ဒါပမေယျ့ တကယျလို့ ကျောဖီ သို့မဟုတျ အားဖွညျ့အခြိုရညျ သောကျပွီးနောကျ နှလုံးခုနျမမူမှနျတာမြိုးခံစားရရငျတော့ ဒါတှကေိုလုံးဝဆကျမသောကျသငျ့ပါဘူး လို့ သတိပေးပွောကွားခဲ့ပါတယျ …… ။
Previous: မိန်းကလေးတွေက အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေကိုပိုသဘောကျရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
Next: “အလှသိပ်မပြင်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပင်ကိုယ် ရုပ်ချောသူတွေဖြစ်ကြောင်း အချက် (၅) ချက်”